Abdihakim Olad – Page 4 – Garsoore Sports
Da’yarka Arsenal Bukayo Saka ayaa maamuusay Jack Wilshere kaddib markii laacibkii hore ee qadka dhexe ee Arsenal uu shaaca ka qaaday inuu ka fikirayo inuu ciyaaraha ka fariisto isagoo 29 jir ah. Wareysi ballaaran oo…
Wayne Rooney ayaa sheegay inuu ka qabo ‘shaki weyn’ in Cristiano Ronaldo uu ku biiri doono Manchester City kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga. Manchester City ayaa haatan diirada saareysa heshiis ay kula soo…
Kylian Mbappe ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Real Madrid kaddib markii kooxda Paris Saint-Germain ay aqbashay dalab gaaraya 180 milyan oo yuuro, sida ay tibaaxayaan wararka ka imaanaya Spain. 22 jirkaan ayaa caddeeyay…
Kufsi loo-heystaha daafaca-biddix uga cayaara kooxda Manchester City ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana uu hor imaan doonaa garsoorayaasha maalinta Jimcaha. Daafaca Manchester City Benjamin Mendy ayaa gacanta lagusoo dhigay kaddib markii lagu soo oogay afar…
Man City Oo Wadahadalo La Furtay Juventus Si Ay Ugala Wareegto Ronaldo
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa u weecatay superstar-ka reer Portugal kaddib markii la xaqiijiyay in Harry Kane uusan ka tegi doonin kooxdiisa Tottenham. Manchester City ayaa Juventus la billaawday wadahadalo ay ku dooneeyso Cristiano…
Tottenham ayaa usoo bandhigi doonta Harry Kane mushahar kordhin gaareeysa £100,000 isbuucii si uu u sii joogo kooxda muddo dheer kaddib markii u dhaqaaqistii Manchester City ay ku guuldareysatay inay dhaqagasho, sida ay qortay The…